Steve Jobs: Ilay milina lehilahy, horonantsary fanadihadiana be fanakianana | Vaovao IPhone
Navoaka vao haingana ny tranofiara ho an'ny fanadihadiana manaraka eo amin'ny maro momba ny fiainan'ny CEO Apple teo aloha Steve Jobs. Ity sarimihetsika fanadihadiana ity dia antsoina hoe "Steve Jobs: The Man Machine", izay iarahan'i Oscar Alex Gibney fiaraha-miasa, ary notsikerain'ny sasany sy ny hafa henjana noho ny fahitana somary hafahafa natolony momba an'i Steve Jobs, mampiseho azy ho olona farafaharatsiny somary saro-pantarina sy somary miavaka. Azo inoana fa ity sarimihetsika fanadihadiana ity dia mifantoka amin'ny fampisehoana ny lafiny maizina an'i Steve Jobs.
Gibney dia efa nahazo Oscar tamin'ny taona 2007 noho ny horonantsary "Taxi to the Dark Side" ary vao haingana no nahazo famerenana tsara momba ny fanadihadiana nataony ho an'ny tambajotra amerikana HBO antsoina hoe "Going Clear." Hiditra amin'ny sinema any Etazonia ny sarimihetsika amin'ny 9 Oktobra, na izany aza dia efa niseho tamin'ny South by Southwest Film festival izy io, izay rehefa nahita an'io, dia sosotra i Eddy Cue, ary nilaza tao amin'ny Twitter fa "manome fomba fijery tsy marina sy bitika momba an'i Steve Jobs", izay manondro fa tsy tena marina ny momba ilay sarimihetsika Steve Jobs.
Ity horonantsary fanadihadiana 120 minitra ity dia namboarina ho fanombanana indray hoe iza i Steve Jobs izay hahagaga ny maro. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity no navoaka ny tranofiara ho an'ilay horonantsary izay hampiseho ny lafiny mangidy sy manaitra indrindra amin'ny fiainan'i Steve Jobs. Raha tsy misy fisalasalana, na dia mety tsy mahafinaritra amin'ny maro aza izany, marina fa ny ankamaroan'ny ankamaroantsika dia tsy mahalala afa-tsy momba an'i Steve izay nolazain'izy ireo tamintsika ary tsy dia betsaka, raha ny tena izy, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy mahita afa-tsy fomba fahagagana fotsiny izy ireo. iza izy. Asa, mampiseho azy matetika ho sary masina.
Ireo mpitia Apple dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mankany amin'ny teatra hijery izay lazain'i "Steve Jobs: The Machine Man" amintsika, mba hahitana izay anolorany antsika momba ny fiainan'ny olona iray manan-danja tokoa mandritra ny tantaran'ny Apple sy izao tontolo izao ny teknolojia amin'ny ankapobeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Steve Jobs: The Man Machine, fanadihadiana fanadihadiana voatsikera mafy
Toy izao no fihetsika ataon'ny ankizy amin'ny iPod Original
Ny PAC-MAN Championship Edition DX dia mipaka amin'ny App Store